लकडाउन : काठमाडौंबाट बेजोडी चप्पल लगाएर घर हिँडेका पाइलाहरू ! – Khabarhouse
लकडाउन : काठमाडौंबाट बेजोडी चप्पल लगाएर घर हिँडेका पाइलाहरू !
Khabar house | ३ बैशाख २०७७, बुधबार ०२:०९ | Comments
काठमाडौं : कलंकी बस्ने रोहिन्द्र मन्डल बिहीबार राति राम्रोसँग निदाउन सकेनन्। बिहान २ बजे नै आँखा खुले। अघिल्लो दिन नै तयार पारेको झोला बोकेर उनी कोठाबाट निस्किए । १३ घन्टा हिँडेर शुक्रबार दिउँसो धुलिखेल पुगेका मन्डल घर पुग्न अझै चार दिन हिँड्नु पर्नेछ। उनको घर सप्तरी हो।
‘लक डाउनले जनताका लागि राम्रो गरेको छ’ पसिना पुछ्दै उनले भने, ‘कामधन्दा केही भएन। आफूसँग भएको पैसा पनि सकियो। खाना खान पनि पैसा छैन। बरू हिँडेरै घर जाने भनेर निस्किएको हुँ।’ उनले बर्दिवास पुग्न दुई दिन र त्यसपछि दुई दिन हिँडे पछि सप्तरी पुगिने बताए। ‘सरकारले लकडाउन चाँडै नै खोल्ला जस्तो भएन।
अहिलेसम्म जसोतसो बसेको थिएँ’ उनले भने, ‘यहाँ बसेर के खाने? बरू घर पुगे खान त पाइन्छ।’ ललितपुरको झम्सिखेल बस्दै आएका सन्तोषकुमार चौधरी पनि हिँडेर घर जाँदैछन्। उनी पनि शुक्रबार दिउँसो धुलिखेलमा भेटिए। सेतोपाटी सँगको कुराकानीमा चौधरीले रासनपानी सकिएपछि घर हिँड्नु परेको बताए। ‘लक डाउनका यतिका दिन बसियो।
रासनपानी सकियो, ठेकेदारसँग अलिकति पैसा मागेर हिँडेरै घर जान लागेको,’ उनले भने, ‘भोलि के खाने भन्ने समस्या आइपरेपछि हिँडेरै घर जाने निर्णयमा पुगेका हौं।’ उनी शुक्रबार बिहान ३ बजे झम्सिखेलबाट सप्तरीस्थित घर हिँडेका हुन् । ‘अब चार दिन हिँड्नुपर्छ, खुट्टा दुखिसक्यो,’ उनले भने, ‘सरकारले लक डाउन खोलि दिएन, हिँड्नुको विकल्प छैन।’ विस्तृतमा सेतोपाटीमा खबर छ ।